Ireo Mpitaingin-tsoavaly Efatra ao Amin’ny Apokalypsy
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kamba Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mbunda Mizo Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Niue Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Twi Tzotzil Umbundu Urhobo Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
Nipoitra tampoka izy ireo sady nirodorodo. Tena mora alaina sary an-tsaina ireo soavaly efatra matanjaka sy ny mpitaingina azy, ka hoatran’ny hitan’ny masonao mihitsy ilay izy! Fotsy ilay soavaly voalohany, ary mpanjaka iray be voninahitra vao nahazo fahefana no mitaingina azy. Misy soavaly iray mena toy ny afo ao aoriany, ary manala ny fandriampahalemana eto an-tany ny mpitaingina azy. Soavaly mainty ngizina ny fahatelo. Mitondra mizana ny mpitaingina azy, ary misy hafatra ambara hoe tsy ho ampy ny sakafo. Soavaly hatsatra ny fahefatra. Famantarana izy io hoe hisy aretina sy loza hafa. Ny Fahafatesana no mitaingina azy io ary manaraka azy akaiky ny Fasana, izay manangona olona faran’izay betsaka!—Apokalypsy 6:1-8.
“Natahotra aho tamin’izaho namaky voalohany ny faminaniana momba an’ireo mpitaingin-tsoavaly efatra. Nihevitra aho hoe efa ho tonga ny Andro Fitsarana, dia tsy ho voavonjy aho satria mbola tsy vonona amin’izany.”—Crystal.
“Nahavariana ahy ireo mpitaingin-tsoavaly efatra mitaingina soavaly samy hafa loko. Rehefa azoko ny dikan’ilay fahitana vao nazava tsara tamiko ny zavatra resahiny.”—Ed.
Hoatran’ny an’i Crystal sa hoatran’ny an’i Ed no tsapanao momba an’ireo mpitaingin-tsoavaly efatra ao amin’ny Apokalypsy? Anisan’ny be mpahalala indrindra io fahitana io amin’ireo zavatra miavaka resahin’ny boky farany ao amin’ny Baiboly. Handray soa ianao raha mahazo ny dikan’ilay izy. Mampanantena mantsy Andriamanitra hoe ho sambatra ianao, rehefa mamaky sy mianatra ary mampihatra an’izay resahin’io boky io.—Apokalypsy 1:1-3.
Misy matahotra an’ilay fahitana momba an’ireo mpitaingin-tsoavaly efatra. Tsy tokony hampahatahotra anefa izy io. An-tapitrisany aza no mahatsapa hoe manatanjaka ny finoany ilay fahitana, ary manampy azy hahita fa ho tsara ny fiainana amin’ny hoavy. Tianao koa ve ny hahatsapa hoatr’izany? Mba vakio àry ny lahatsoratra manaraka.
Hizara Hizara Misy Vokany eo Amin’ny Fiainanao ve Ireo Mpitaingin-tsoavaly Efatra?
wp17 No. 3 p. 3